ဥာဏ်ကောင်းဖို့အတွက်အ ကောင်းဆုံးအစားစာများ – Trend.com.mm
စာတွေကျက်ပြီးတာနဲ့ ခဏ လေးနေရင်မေ့ နေပြီလား? ဒီလိုဖြစ်တာဟာ စာကို သေချာမကျက် ပဲ အ ပေါ်ယံကျက်လို့ဖြစ်တာလဲ ဖြစ်နိုင်သလို ဦးနှောက်မှတ်ဥာဏ် အလုပ်လုပ်ရတာများပြီး နှေးကွေးတာေ ကြာင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥာဏ်ကောင်းပြီး အလွယ်မှတ်မိနိုင်စေဖို့ သင့်ဦးနှောက်အတွက် ဘယ်လိုအစားစာလေးတွေကို စားပေးသင့်သလဲ?
အမွှေးရနံ့သာ ဟင်းခတ်အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့ပူစီနံဟာ ညဏ်ရည်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေပြီး ဦးနောက်စွမ်းရည်ကိုလည်းမြှင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမလိုအပ်တဲ့အဆီတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ ၀ိတ်ကျဆေးတစ်မျိုးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
စားလို့ရတဲ့ အုန်းဆီကို စားသုံးပေးခြင်းဟာလည်း ညဏ်ရည်စွမ်းအားကိုမြင့်မားစေပါတယ်။
ဦးနှောက်အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားရရှိဖို့ဥအမျိုးမျိုးကို မရှောင်ပဲစားသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥရှောင်တဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ဥ အမျိုးမျိုးကိုစားသုံးတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ညဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာသိသိသာသာကိုကွာဟလှပါတယ်။
လက်ဖက်စိမ်းရေနွေးကြမ်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အခါဓာတ်ဟာ စိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေပြီးမှတ်ညဏ်စွမ်းအားကိုပိုမို မြှင့်တင်ပေးစေနိုင်ပါတယ်။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းဟာ ရိုးရိုးပန်းဂေါ်ဖီဖြူတွေ ဂေါ်ဖီထုတ်တွေထပ်ကိုပိုပြီး အာဟာရပြည့်ဝပါတယ်။ သူ့မှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တစ်ချို့ကြောင့်မှတ်ညဏ်စွမ်းအားကိုကောင်းစေပြီး မလိုအပ်တဲ့အဆီပိုတွေကိုလည်းလျော့ချပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဇာတ်လမ်းတွဲမှာ တွဲဖက်မြင်တွေ့လာရနိုင်တဲ့ Park Shin Hye နဲ့ Cho Seung Woo